RASMI: Kooxda Liverpool oo ku dhawaaqday Liiska 23-ka ciyaaryahan ee uu kala qeyb-galayo Koobka Kooxaha Adduunka – Gool FM
Haaruun December 5, 2019
(Liverpool) 05 Dis 2019. Macallinka Kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa magacaabay liiska 23-ka xiddig ee bishaan uu kala qeyb-galayo Koobka Koobka Adduunka ee Fifa Club World Cup, kaasoo ka dhacaya Waddanka Qatar.
Reds ayaa kulankeeda ugu horreeya ee tartankan ciyaaraysa Arbacada oo ay taariikhdu tahay 18-ka bishaan, waana wax ka yar 24-saacadood marka ay Anfield kula ciyaaraan Carabao Cup naadiga Aston Villa.
Tababare Klopp ayaa shaxdiisa uu u kaxaysanayo Qatar waxa uu ku daray Van Dijk, Alisson iyo Salah.
Xiddigo sida Brewster, Elliott iyo Jones ayaa sidoo kale safarka kala qeyb-galaya hoggaamiyaha reer Jarmal ee Klopp.
Joel Matip iyo Fabinho ayaa laga tagay oo aan Koobka Kooxaha Adduunka u raacaynin Reds, waxaana ay sii wadi doonaan soo kabashadooda dhaawacyada.
LIISKA KOOXDA LIVERPOOL UGA QEYB-GALAYA KOOBKA KOOXAHA ADDUUNKA EE LAGU DHAWAAQAY:-